ghar basi online paisa kamaune tarika
यो एप बाट कसरि पैसा कमाउन सकिन्छ ?
यस एप मा भएको Share and Earn लिंक लाई imo / Viber / Whatsapp / इमेल मार्फत आफ्नो साथी-भाई हरुलाई र फेसबुक ग्रुपमा शेयर गर्नुहोस त्यो लिंक मार्फत रजिस्टर हुन गएकोमा तपाईं ले 50 पोइन्ट पाउनु हुनेछ ।
रजिस्टर गर्नको लागि तल दिएको लिङ्क थिची रजिस्टर गर्नुहोस्
कसरि दर्ता हुन सकिन्छ केहि जानकारी दिनुहोस्..
तल दिएको भिडिओ लिङ्क लाइ थिची भिडिओ हेर्नुहोस
हामीले यहा बाट कमाएको पैसा कसरि पाउने छौं ?
Newasauji एपमा अनलाइन काम गरी तपाईं ले अनलिमिटेड पोइन्ट कमाउन सक्नुहुनेछ र कमाएको पोइन्ट बाट यहाँ भएको स्टोर बाट किनमेल गर्न पाउनु हुनेछ । कम्पनीको मोटीवेटर हुनसकेमा महिना को 25000 सम्म कमाउन सक्नुहुनेछ । मात्र मोटीवेटरले आफ्नो पैसा बैंकमा ट्रान्सफर गराउन सक्ने छ ।
pro version भनेको के हो ?
pro version मा अपग्रेड गरेका प्रयोगकर्ताले, साधारण प्रयोगकर्ता भन्दा बढी पोइन्ट कमाउने अवसर पाउनेछन ।
निशुल्क version मा रजिस्टर गराको 50 पोइन्ट आउंछ भने Pro मा 200 पोइन्ट आउछ ।
Pro प्रयोगकर्ताले टास्क बाट (भिडिओ हेरेर, फेसबुक पेज लाइक/शेयर गरेर, एड हेरेर) जस्तै अन्य टास्क कम्प्लिट गरेर कमाउन सक्नेछन ।
Pro प्रयोगकर्ता द्वारा रजिस्टर गराइको अन्य Pro प्रयोगकर्ताले Newasauji मा रहेको Store बाट खरिद गर्दा, रेफर गरेको Pro प्रयोगकर्ताले 3%* सम्मको कमिशन पाउने छन् ।
Pro प्रयोगकर्ताले 500 भन्दा बढी Pro प्रयोगकर्ता रजिस्टर गराएमा कम्पनिले मोटीवेटर बोनस (बैंकमा ट्रान्सफर*) दिने सुविधा पाउने छन ।
Follow these steps to install the Newa Sauji Pro Android App
एपमा भएको Bid for Win भनेको के हो ?
एप प्रयोगकर्ताले निलामी (Auction)मा राखिएको सामान/सेवाको न्यूनतम मुल्य लगाउन सक्नुहुनेछ। प्रयोगकर्ताले लगाइएको बोली(BID) न्युनतम हुनको साथै सिंगल पनि हुनुपर्दछ। सो भएमा उक्त प्रयोगकर्ता Winner बन्नेछ र उक्त सामान/सेवा लिन पाउने छ। Low & Unique Bid भनेको प्रयोगकर्ता लाई देखाइएको प्रोडक्ट / सेवा को लागि रु 1 बाट Lowest Bid गर्न सकिनेछ । र Winner बन्नको लागि लगाइएको BID, Unique भन्नाले अरु भन्दा फरक हुनुपर्दछ ।
तल देखिएको इमेज मा हेर्नुस
Newasaujiको एप वेब प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्ताले एप/ वेबसाइटको सबै नियमहरू पालन गर्न सहमत हुनुपर्दछ। तपाईंले I Accept Terms & Condition गर्दा स्वीकार गर्नुहुन्छ कि यी नियमहरू समयसँगै परिवर्तन हुन सक्दछन् र तपाईं तिनीहरूको सब भन्दा हालको फारमको पालना गर्नुहुनेछ। हामी निम्न नियमहरूको विशेष उल्लेख गर्न चाहन्छौं जुन प्रयोगकर्ताहरूलाई गर्न कडाइका साथ प्रतिबन्धित छ:
यस एपमा रजिस्टर भएर कार्य गर्दा कम्पनिको नियम बिपरित कार्य गर्न पाइने छैन सो गरेमा कम्पनिले उक्त युजरको रजिस्ट्रेशन ब्लक गर्न सक्ने छ ।
एउटै मोबाइलमा धेरै न. को रजिस्टर गर्न पाइने छैन ।
अन्य व्यक्तिको न. लाई, सो व्यक्तिलाई जानकारी न गराई रजिस्टर गर्न पाइने छैन ।
रजिस्टर गर्दा दर्ता गराइने व्यक्तिगत विवरण फेक राख्न पाइने छैन ।
कुनै पनि प्रोक्सी सर्भरहरू प्रयोग गरेर दर्ता गरिएका सबै खाताहरू मेटिने छन्।
तपाईं बहु खाताहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्न।
तपाईं आफ्नो IP ठेगाना परिवर्तन गर्नका लागि VPN, प्रोक्सी वा अन्य उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न।
तपाईं वेबसाइटमा बट्स, अटो क्लिकरहरू र हाम्रो बाह्य लिपिको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न।
तपाईं घृणास्पद, डरलाग्दो, वा अश्लील सामग्री, हिंसा उत्तेजित, वा नग्नता वा ग्राफिक वा उपद्रवी हिंसा समावेश सामग्री पोस्ट गर्न सक्नुहुन्न।
तपाईं भाइरस वा अन्य मालिसियस कोड अपलोड गर्न सक्नुहुन्न।
तपाईं Newasauji एप वेब लाइ प्रयोग गरी गैरकानूनी, भ्रामक, द्वेषपूर्ण वा भेदभावपूर्ण केहि पनि प्रचार सामग्री शेयर गर्न सक्नुहुन्न ।
हाम्रो प्रणालीमा देख्नुहुने कुनै पनि बगलाई यदि तपाईंले यो देख्नु भयो भने, हामीलाई रिपोर्ट गर्नुहोस्। यसको फाइदा नलिनुहोस्, यदि तपाईंले गर्नुभयो भने, तपाईं प्रतिबन्धित हुनुहुनेछ र तपाईंको पोइन्ट ० मा रिसेट हुनेछ।
यदि हामीले तपाईंको खाता एक पटक ब्लक गर्‍यौं भने, तपाईंले अर्को खाता सिर्जना गर्न सक्नुहुन्न।